Banyere Anyị - Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.
Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd bụ onye a ma ama na-emepụta ụlọ elu ọkụ mkpanaka nke nwere ike nyocha na mmepe mmepe na ikike mmepụta ihe.Ebe ọ bụ na e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro nkà ihe ọmụma azụmahịa nke iguzosi ike n'ezi ihe, ọkachamara, ihe ọhụrụ na ịdị mma, na kpebisiri ike na ịmepụta ngwaahịa ọkụ dị elu.
Ka ọ dị ugbu a, usoro ọkụ ọkụ ekwentị, usoro ọkụ ọkụ mberede mberede, mgbapụta ọkụ mberede na ngwaahịa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ na-emepụta na-ejikarị ụlọ ọrụ ọkụ, ọdụ ụgbọ elu na ngalaba ndị agha, na-erekwa ụfọdụ ngwaahịa na Australia na Middle East.
Ọrụ nhazi ngwaahịa bụ isi asọmpi nke ụlọ ọrụ ahụ, ngwaahịa anyị niile sitere na ahaziri maka ndị ahịa.Gụnyere ugwu dị iche iche nke mpaghara ala dị larịị, oke okpomọkụ, iru mmiri dị elu na mpaghara agwaetiti nnu, mpaghara ugwu oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, wdg.Our ngwaahịa. enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na-arụ ọrụ ike, iwu ụgbọ okporo ígwè, iwu okporo ụzọ, mwube m, ọkụ ọdụ ụgbọ elu, nnukwu ọkụ ọkụ ámá egwuregwu, ọkụ ọkụ n'àgwàetiti, mmanụ na mmanụ olulu mmiri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, nchekwa ọha, ọkụ, njikwa idei mmiri, mgbochi ọdachi na mbelata, mberede mberede. nnapụta na ọtụtụ ubi ndị ọzọ.
Igwe ọkụ na ihe ndị ọzọ bụ isi nke ngwaahịa ndị ụlọ ọrụ anyị na-emepụta na-abụkarị nke ụdị ama ama ama ụwa na nke ụlọ iji hụ na ịdị mma na ntụkwasị obi nke ngwaahịa.Kubota, Perkins, Kohler, Yanmar, Yangdong, Honda, Sinocox, Meccalte, Stamford , Leroysomer, Smartgen ụdị bụ ndị mmekọ anyị.
Ngwaahịa & ụlọ ọrụ Brighter
Ngwaahịa anyị na-emeri ugboro ugboro na ntinye aka dị mkpa, wee nweta aha na ụlọ ọrụ ike, njikwa ihe mberede mba na nchebe oke agwaetiti na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa.
Na usoro nke ngwaahịa mmepe na ọhụrụ, Brighter Electromechanical Co., Ltd. ruru a miri emi imekọ ihe ọnụ na Shenzhen Lehui Optoelectric Technology Co., Ltd. na 2017, na ghọrọ ya na-ejide enyemaka.Relying na ya ike oru ike na ahịa mmepe ike, N'oge na-adịghị anya ụlọ ọrụ anyị ghọrọ ike ọhụrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ngwaahịa mberede ụlọ.
Ọrụ mbụ, àgwà bụ eze ka a na-ewere dị ka ihe kachasị mkpa nke omenala ụlọ ọrụ anyị. Site na mbata nke oge ọhụrụ, na iguzosi ike n'ezi ihe na àgwà ngwaahịa dị ka nkwado nke Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd. ga-enwe ọganihu dị ukwuu, na-agba ịnyịnya. ifufe,